Henry Kissinger: Durbaan dagaal ayaa la tumayaa… | isbeddel
Somalia Then and Now →
Henry Kissinger: Durbaan dagaal ayaa la tumayaa…
Henry Kissinger: Durbaanno dagaal ayaa la garaacayaa, haddii aanad maqlaynin…waad dhego la’dahay!
Henry Kissinger, cajuuska siyaasadda maraykanka, la taliyaha arrimaha ammaanka ee dawladda maraykan ah, wakhtigii Nixon na ahaan jirey wasiirka arrimaha debedda ee dalkaas ayaa dhowaan afka gacanta iska geliyey. Waraysi uu siiyey bil ka hor jariidadda Daily Squip, maalinle maxalli ah oo ka soo baxda New York, ayaa uu daaha kaga qaaday arrimo af-kala-qaad ah oo ku saabsan bariga dhexe iyo dunida oo dhan.
Kissinger, oo dhawaan u dabbaal degi doona dhalashadiisa 89-aad—haddii uu gaadhaba dee—ayaa ku sheegay waxa maanta dunida ka dhacaya gogol xaadh loo samaynayo dagaal saddexaad oo ay ku hirdami doonaan Russia iyo China oo dhinac ah iyo Maraykanka oo dhinaca kale ah.
Kissinger waxa uu filayaa in dagaalkaasi uu noqon doono mid daran oo aan laba guulood ka soo bixi doonin ee ay awood keli ah oo guulaysataa ka soo bixi doonto. Dabcan Maraykan ayuu qabaa in uu noqon doono kaasi. Henry waxa uu yidhi; Maraykan faraha ayuu ka qaaday China si ay cudud millatari u dhistaan, Russia-na wuu u sii laan-daayay si uu uga soo kabto dhaxalkii USSR iyo dhaqaale xumada raafaha jebisay, taas oo labadaa quwadood u yeeshay haybad isa soo taraysa oo ay dunida ka helaan. Laakiin haybad is-moodsiiskani waxa uu sabab u noqon doonaa dhowaan-dhimashada labadaa quwadood iyada oo Iiraan na raaci doonto maaddaama ay tahay waxa keli ah ee Israa’iil rabto in uu dhaco.
Kissinger waxa uu intaa ku daray in EU-gu dhugtay iska hor imaadkaa lagama maarmaanka ah ee ka dhex dhici doona Maraykan iyo China/Russia, markaasna ay ku khasabtay in ay dhistaan awood millatari oo xooggan.
Waxa uu tilmaamay in rugaha lagu lafo-guro istaraatiijiyadda Maraykanku ka codsatay madaxda millatariga in ay qabsadaan toddoba dal oo Bariga Dhexe ah si looga abdaysto kheyraadkooda dabiiciga ah, gaar ahaan shidaalka iyo gaaska. Waxa uu hoosta ka xarriiqay in faro ku haynta shidaalku tahay ta ummadaha lagu gumaysan karo; cuntada dunida oo la maamulaana tahay ta lagu addoonsan karo bulshooyinka.
Waxa uu Yahuudigan cajuuska ahi sheegay in ay awoodda millatari ee Maraykan qorshahan suurto gelisayba ama ay in yar u jirto xaqiijinteeda. Mid keli ah ayaa hadhay si loo ilaaliyo daalac-naasilnimada dunida; waa in Iiraan laga takhallusaa, ayuu leeyahay.
Kissinger waxa uu sheegay in uu og yahay Russia iyo China in aanay mushaahidiin al kiraam ka noqon doonin baabi’inta awooddooda, gaar ahaan haddii Israa’iil dagaal cusub oo carab badan ku laynayso qaaddo. Markan, ayuu leeyahay, ayuu toosi doonaa Yeyga Ruushka ah iyo Qarandida Chinese-ka ahi; xilligaa, ugu yaraan kala badh Bariga Dhexe waxa uu noqon doonaa Israa’iili…masuuliyadda ugu weynina waxa ay dusha ka fuuli doontaa ciidamadeenna—halkan waxa aan ula jeedaa ciidamada Maraykanka iyo kuwa reer galbeedka—ee sida gaarka ah u tabobaran ee weliba diyaarka u ah in ay galaan dagaal saddexaad oo dunida ah oo ay iskaga hor imanayaan Ruushka iyo Indho-yarta.
Dambaska dagaalkaas ayaa laga dul qotomin doonaa quwad weyn oo adag oo keli ah oo guulaysatay oo ah xukuumadda caalamiga ah ee ka talisa dunida oo idil. Hana illaawina in USA haysato xoolaha ugu badan iyo cududda millatri ee ugu weyn dunida—taas oo aanay cidina ka war qabin inta ay la’eg tahay. Waxaannu soo bandhagi doonnaa xooggayaga xilliga ku habboon…iyada oo dunidu daawanayso.
Durbaanno dagaal ayaa la tumayaa cidda aan maqlaynin na way dhego culus tahay!
Posted by Warfaa on Janaayo 29, 2012 in Uncategorized